नयाँ मर्यादाक्रम सार्वजनिक, कसको स्थान कति नम्बरमा ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
नयाँ मर्यादाक्रम सार्वजनिक, कसको स्थान कति नम्बरमा ?
काठमाडौं । सरकारले नयाँ सरकारी मर्यादाक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले राष्ट्रपतिलगायत बिभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरुको मर्यादाक्रम हेरफेर सहित सार्वजनि गरेको छ। ०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि बरियता हेरफेर गरेको थियो । जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीभन्दा माथि राखिएको छ ।
पहिलोमा राष्ट्रपति , दोस्रोमा उपराष्ट्रपति, तेस्रोमा प्रधानमन्त्री चौथोमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, पाँचौमा पूर्व राष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रहेका छन् । छठौ नम्बरमा प्रदेश प्रमुख (आफ्नो प्रदेशमा) बाहिर भने सातौ नम्बरमा पर्नेछन् । सातौमा मन्त्री, मुख्यमन्त्री, पुर्वमन्त्रीसम्म रहेका छन् ।
आठौमा नेपाल सरकार राज्यमन्त्रीदेखि, संसदमा दलका प्रमुख सचेतक, समितिका सभापति छन् । प्रदेशका मन्त्री र केन्द्रका सांसद, राज्यमन्त्री, काठमाडौं महानगरका मेयर, पूर्वसांसद, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति नवौं नम्बरमा छन् । अन्य महानगरका मेयर, प्रदेशका सहायकमन्त्री लगायत खशौं नम्बरमा छन् ।